- एनआरएनए बौद्धिक बहसः विदेशमा सिकेको ज्ञान नेपालमा कसरी प्रयोग गर्ने ?
अमेरिकाः गैरआवासीय नेपाली संघ समन्वय परिषद्को दोस्रो विश्व नेपाली स्वास्थ्य सम्मेलनका अवसरमा आज ब्रेन गेनः विश्व नेपाली स्वास्थ्यका लागि अवसर र चुनौती विषयक कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो ।
उक्त भर्चुअल कार्यक्रममा नेपाल लगायत विश्वका विभिन्न मुलुकमा छरिएर रहेका विभिन्न क्षेत्रका बौद्धिक व्यक्तिहरुको सहभागिता थियो ।
डा. उत्तम गौलीले सञ्चालन गरेको उक्त कार्यक्रममा बोल्दै ब्रेन गेन सेन्टरका कोअर्डिनेटर सन्तोष गौतमले विदेशी भुमिमा रहेका नेपालीहरुलाई कुनै न कुनै हिसाबमा नेपालसँग जोड्न ब्रेन गेन सेन्टरले पुलको भूमिका खेल्ने बताए ।
इमेल तथा विभिन्नमाध्यमबाट विश्वका विभिन्न मुलुकमा रहेका बौद्धिक नेपालीहरुसँग सम्पर्क गर्ने काम ब्रेन गेन सेन्टरले गरिरहेको उनले उल्लेख गरे ।
सेन्टरले रिटर्नीहरुका लागि थुप्रै कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको तर कोभिड–१९ का कारण ति कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने समय केही पछाडि धकेलिने अवस्था सिर्जना भएको उनले जानकारी दिए ।
‘को कहाँ हुनुहुन्छ ? उहाँहरुको विज्ञता कस्तोे छ भनेर हामी खोजि गर्छौं । देशभित्र र बाहिरका विज्ञहरुलाई जोड्ने तथा उहाँहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने ब्रेनगेन सेन्टरले गर्छ’ सेन्टरका कोअर्डिनेटर सन्तोष गौतमले भने ।
कार्यक्रममा बोल्दै एनआरएनए एनसीसी अस्ट्रेलियाका उपाध्यक्ष मन केसीले नेपालीहरु विश्वका जुनसुकै स्थानमा भए पनि नेपालभित्र अप्ठ्यारो परेको अबस्थामा सक्दो रुपमा आफ्नो अनुभव र ज्ञानलाई प्रयोग गर्न तत्पर रहेको र एनआरएनएले पनि यसका लागि सहयोग गर्ने बताए ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले अघि सारेको ब्रेन गेन सेन्टर निकै उपयोगी भएको तथा यसबाट विदेशमा रहेका नेपालीहरुले सिकेको ज्ञान, सीप, प्रविधिबाट नेपालले लाभ लिन सक्ने उनले जोड दिए ।
कार्यक्रममा बोल्दै अफ्रिकामा कार्यरत डा. सरिता पाण्डेले अफ्रिकामा रहेका नेपालीहरुले आफूले आर्जन गरेको ज्ञान हाइड्रो पावर, आइटी, इन्जिनियरिङ, कृषि लगायत अधिकांश क्षेत्रमा विदेशमा प्रयोग गरेको बताइन् । आफूले अफ्रिकामा बसेर पनि नेपालका लागि थुप्रै काम गरिरहेको र आवश्यक परेको अवस्थामा सहयोग गर्न तत्पर रहेको उनले उल्लेख गरिन् ।
नेपाल आर्युवेद डाक्टर एशोसिएसनका अध्यक्ष डा. प्रकाश ज्ञवालीले गैरआवसीय नेपालीले सिकेको ज्ञान, सीप, प्रविधि र पुँजी नेपालमा प्रयोग गर्ने व्यवस्था संविधानमा नै व्यवस्था भएको बताए ।
‘नेपालीहरुले विदेशमा सिकेका कुराहरुलाई प्रयोग गरेर देशले पनि केही सिक्न सक्ने देखिन्छ । विदेशमा बसेर पनि देशका लागि केही गर्न सकिने र देशले पनि विदेशमा रहेका नेपालीहरुबाट लाभ लिन सक्ने अवस्था छ’ उनले भने ।
यसले समग्र मानव विकास गर्ने तथा विश्वमा नेपालीहरुको पहुँच बढाउने, बौद्धिक विकासका साथै अन्य विकास समेत सहयोग पुग्ने उनको जोड दिए ।
कार्यक्रममा बोल्दै क्लिनिकल साइक्लोजिस्ट डा. बैकुण्ठ सुवेदीले नेपालको शिक्षा भर्चुअल प्रविधिमा गइसकेकाले भर्चुअल प्रविधिबाट नै विदेशमै रहेर पनि नेपालका लागि योगदान पुर्याउन सकिने अबसर रहेको बताए ।
कार्यक्रममा अमेरिकन कर्नरका कोअर्डिनेटर हृदयशकुमार केसी, युकेबाट डा. पुष्पराज पन्त, कर्णाली प्रदेशबाट अनन्तराज पन्त लगायतले आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरेका थिए ।
प्रकाशित मितिः शनिबार, असोज ३, २०७७, २१:०९